/blog/nandrolone decanoate , Nandrolone Phenylpropionate/Nandrolone Decanoate ntụ ntụ na Nandrolone phenylpropionate powde
Ihe na 04 / 05 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na nandrolone decanoate, Nandrolone Phenylpropionate.
Gịnị bụ Nandrolone Decanoate ntụ ntụ(Deca)?
Nandrolone Decanoate bụ onye na-ahụkarị steroidal hormone Nandrolone ma tinye ya na nnukwu Decreate ester. Ngwongwo Nandrolone nke mbụ pụtara na 1960 ma mepụtara maka azụmahịa na 1962 site na Organon n'okpuru aha ahia Deca Durabolin. Kemgbe ahụ ọtụtụ nsụgharị Nandrolone Decanoate abanyewo n'ahịa, mana Deca Durabolin na-anọgide na-aghọta. Nke a abughi nke mbụ Nandrolone na-emepụta, nke ga-abụ Organon's Durabolin, nke bụ kpọmkwem Nandrolone Phenylpropionate. Ụdị Phenylpropionate na-eme ngwa ngwa karịa oge na-adịghị arụsi ọrụ ike, mgbe Phenylpropionate na-ewu ewu, Deca Durabolin emeela ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ahịa Nandrolone.
Nandrolone Decanoate bụ otu n'ime ọgwụ ndị anabolic kachasị na-emekarị n'etiti ndị na-eme egwuregwu. A maara nke ọma maka ịbụ nnukwu steroid steeti oge dị ukwuu, mana ọ bụkwa ọkacha mmasị n'ọtụtụ egwuregwu maka mgbatị ya. N'ihi uru bara uru dị ukwuu, ọgwụgwọ Nandrolone bụ otu n'ime ọgwụ ndị anabolic kasị baa uru na usoro ahụike. Otú ọ dị, kemgbe afọ ole na ole nke arụmụka nke anabolic steroid dị otú ahụ enwewo nnọọ oke na US maka ọtụtụ afọ. N'èzí US Deca Durabolin na-anọgide na-ewu ewu na usoro nlekọta ọgwụgwọ nke nwere ike ikpuchi ọtụtụ ebe.
Gịnị bụ Nandrolone phenylpropionate(NPP)?
Nandrolone Phenylpropionate bụ steroid anabolic nke dị nnọọ ka Nandrolone Decanoate na-ewu ewu. Otú ọ dị, Nandrolone Phenylpropionate bụ nandrolone mbụ a na-ere azụ. Phenylpropionate nke Nandrolone kụrụ shelves na 1950 si n'aka Organon n'okpuru aha Durabolin. N'oge na-adịghị anya Organon ga-ahapụ nwa nwanne nna ya bụ Deca Durabolin.
Phenylpropionate Nandrolone bụ obere ester base anabolic steroid na a na-akpọkarị NPP. Ngwaahịa a adịbeghị ka ewu ewu dị ka mbipụta dị ukwuu nke ester Decanoate, n'akụkụ ụfọdụ n'ihi nnweta; Otú ọ dị, na oge a, ọ malitere ịhụ nlọghachi na iji ya na nnweta na-ekele na akụkụ nke ụlọ larịị.
Gịnị bụ Nandrolone Decanoate ntụ ntụ?
Aha: Nandrolone Decanoate / DECA
Ụdị Mkpụrụkpụ: C28H44O3
Ọbara Mkpụrụ: 428.65
Ntọala Melt: 33-37 ℃
Gịnị bụ Nandrolone phenylpropionate ntụ ntụ?
Aha: Nandrolone phenylpropionate / NPP
Ụdị Mkpụrụkpụ: C27H34O3
Ọbara Mkpụrụ: 406.57
Nchekwa Nche: -20ºC
Nandrolone Decanoate ntụ ntụ onunu ogwu:
Deca Durabolin bụ onye na - eme ihe na - adịghị ngwa ngwa nke na - enweghị ike ịgbanye ya ugboro ugboro. N'ọtụtụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ, a na-enye onyinye nanị otu ugboro n'izu 2-4 niile n'izu izu 3-4 dịkarịsịrị. Ekebe ga-abụ na ịgwọ ọrịa anaemia; mgbe a na-ejikwa Deca Durabolin agwọ ọrịa anaemia kwa izu. Maka nchụso ọ bụla metụtara ọrụ, otu ịṅụ ọgwụ otu izu ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, ụfọdụ ga-ahọrọ ịkọwa nke a n'ime obere obere injections kwa izu iji belata mkpụmkpụ ntụtụ.
Ụdị dosing nke Deca Durabolin na-adaba na 100mg kwa izu 2-4 maka usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ na 100-200mg kwa izu maka ọgwụgwọ anaemia. Maka onye na-eme egwuregwu na-achọ nlọghachi na enyemaka, 100mg kwa izu bụ ebe dị mma, mana ọtụtụ ga-enwe obi ụtọ karị na 200mg kwa izu. Ụdị nhazi ahụ ga-eme ka mgbake, enyemaka, na ntachi obi na-eme ka ọ dịkwuo mma ma nyekwuo mmụba anabolic. Maka ezi uru nke anabolic, 300mg kwa izu na-atụle oke dose oke. Ọtụtụ ga-achọta 400mg kwa izu ka ha bụrụ ọkwa dosing zuru oke, ma dị mkpa karị, nke ọma n'ime ọkwa. Ọtụtụ ndị ikom nwere ike ịnagide usoro dị ka 600mg kwa izu. Nke a ga - eme ka ihe ize ndụ nke mmetụta ọjọọ pụta ma mgbe 400mg kwa izu zuru oke, mana ọnọdụ dịgasị iche iche ga - ekpebi ihe ọ ga - eme.
Deca Durabolin ekwesịghị iji ya mee ihe na-erughị izu 8 mgbe a na-eji ya arụ ọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ dị oke arụ ọrụ ngwa ngwa, onye ọ bụla ga-achọkwa iji ya ruo ogologo oge iji nweta ụgwọ ọrụ. Izu asatọ kwesịrị ịbụ nke kachasị nta, ma ozugbo a kwụsịrị, ụlọ ahụ ka ga-arụ ọrụ n'ime ahụ ruo ọtụtụ izu. Dịka izu 8 dị ntakịrị, izu 10-12 ga-adọrọ nnọọ mma maka ọtụtụ ndị ikom. Ojiji nwere ike gbasaa ebe a ma anaghi akwado ya; ọtụtụ n'ime ha agaghị emepụta usoro ihe omume karịa oge 12-16 n'èzí na arụmọrụ hardcore arụmọrụ, na n'ọnọdụ ndị ahụ, a na-enye ndụmọdụ dị oke ntụgharị nke hormones steroid.
Maka ụmụ nwanyị na-egwu egwuregwu, 50mg kwa izu maka ihe karịrị 4-6 izu bụ ihe niile a ga-anabata. A ga - enwe ụfọdụ ndị ga - enwe ike ijikwa 100mg kwa izu, ma ụdị ọgwụgwọ a ga - emepụta mgbaàmà na - alụbeghị ọhụrụ n'ọtụtụ ụmụ nwanyị. Maka usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ, Deca Durabolin ga-ejikarị na 50-100mg na-elekọta kwa izu 3-4. Na ọgwụgwọ anaemia, 50-100mg kwa izu bụ ụkpụrụ.
Nandrolone phenylpropionate usoro onunu ogwu:
N'ọnọdụ ahụike, ụmụ nwoke Nandrolone Phenylpropionate doses ga-adaba na 50-100mg kwa izu. Maka iji nwanyi eme ihe, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke a na-edekarị ya ma ọ bụrụ na edepụtara ya ga-abụ 50mg kwa izu. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọgwụgwọ niile, mbipute Decanoate bụ ihe ga-edozi.
Agbanyeghi oke ogwu eji eme ihe ndi mmadu eji eme ihe kwa izu ma obu mebie ya kwa ubochi ozo maka ihe oma. Ụbọchị 8-12 bụ oge nkịtị maka ọtụtụ ndị egwuregwu. Ekewa bụ ndị na-egwu egwuregwu nke nwanyi nwere ike iji steroid maka izu 4-6 ma na-ejikarị mee ihe karịa 50mg kwa izu ọ bụrụ na a ga-ezere virilization.
uru nke zụta Nandrolone ntụ ntụ site na AAS Nandrolone uzuzu soplaya:
Tags: ịzụta Nandrolone Mkpụrụ ntụ ntụ, Nandrolone Decanoate ntụ ntụ
Testosterone Undecanoate ntụ ntụ maka bodybuilding	20 ihe kachasị mkpa Ị ga-achọ ịma gbasara ọkụkọ Lorcaserin HCL